Umsebenzi omtsha wokuqalisa ugonyo eJamaica
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Umsebenzi omtsha wokuqalisa ugonyo eJamaica
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Unyango lokugonya iJamaica
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, utyhile ukuba umsebenzi owenziwe liQela lezoKhenketho lokuTsalela uKhenketho, nelasekwa ukuququzelela ukugonywa kwabo bonke abasebenzi bezokhenketho esiqithini ngokubanzi, uyaqhuba, nokukhutshwa kweziza zogonyo kwalapha. Iqela elisebenzayo liququzelele uthotho lwezitofu zokugonya, eziqala ngokusesikweni namhlanje (Agasti 30), kwiindawo ezinobuchule kwesi siqithi.
Eyona njongo yephulo lokugonya kukuqinisekisa ukuba bonke abasebenzi bezokhenketho abayi-170,000 bayagonywa bakhuselwe.
Umphathiswa Wezokhenketho uBartlett uthe ukugonywa kwabasebenzi bezokhenketho ngumba ophambili ekubuyiseni ngokupheleleyo ukhenketho.
Ezi blitzes zokugonya zibanjwa ngentsebenziswano nePhulo lokuGonya amaCandelo abucala.
“Iqela elisebenzayo belisebenza ngokuzimisela ukusukela kwintlanganiso yalo yokuqala nge-20 ka-Agasti, ukuqinisekisa ukuba senza kube lula kubasebenzi bethu bezokhenketho ukuba bakwazi ukufikelela kwizitofu zokugonya. Sibamba ngazibini kumaqabane ethu athe enza ukuba sikwazi ukuqala uluhlu lwethu lokugonya namhlanje, ngokungathandabuzekiyo oluya kusisondeza kwinjongo yethu yesizwe yokhuselo lomhlambi, utshilo uMphathiswa uBartlett.
Ukhenketho lwaseJamaica Hon. Umphathiswa u-Edmund Bartlett
“Eyona nto sijolise kuyo kukuqinisekisa ukuba bonke abasebenzi abakhenkethi abayi-170,000 bayagonywa bakhuselwe kumonakalo onokuthi ubekho ngenxa yokufumana intsholongwane eyingozi ye-COVID-19 kunye nezinto zayo. Oku kuyakunceda kwimizamo yethu yokubuyisela icandelo kunye nokwandisa ilizwe, ”wongeze watsho.
Ukhenketho lwaseJamaica UMphathiswa uBartlett ugxininisile ukuba “eli linge lijolise ekukhuthazeni abasebenzi bethu bezokhenketho ukuba bathathe isitofu ngokuzithandela, ngoko ke ugonyo alugunyaziswanga. Ugonyo lwabasebenzi bezokhenketho lungundoqo ekuvuseleleni ngokupheleleyo kwezokhenketho. Ke ngoku mna sikhuthaze bonke abasebenzi bethu bezokhenketho ukuba bagonywe ukudlala indima yakho ekukhuseleni icandelo lethu lokhenketho. ”
Ucacisile ukuba ii-blitzes zokugonya zilungiselelwe i-Pegasus, Kingston, namhlanje ngo-Agasti 30, 2021; Iimbadada uNigril, Negril ngoSeptemba 2, 2021, naseMoon Palace, eOchi Rios ngoSeptemba 3, 2021. I-blitz yokugonya eza kubanjelwa kwi-Moon Palace, ingakumbi, iya kujolisa kubasebenzi bezokhenketho abali-1,000 XNUMX.
Iqela elisebenzayo lisebenza ngokubambisana neSebe lezeMpilo kunye neMpilo, iSebe loRhulumente waseKhaya kunye noPhuhliso lwaMaphandle, i-Private Sector Organisation yaseJamaica (PSOJ) kunye nabachaphazelekayo bezokhenketho, kumacandelo karhulumente nakwabucala, ukukhawulezisa nokukhawulezisa. ugonyo lwabasebenzi bezokhenketho.
Ezi blitzes zokugonya zibanjwa ngentsebenziswano nePhulo lokuGonya amaCandelo abucala. Iindawo zeMontego Bay, iPort Antonio kunye noNxweme oluseMazantsi ziya kumiselwa kamva.
Nangona kunjalo, ezinye iziza ezicetywayo zemisebenzi yokugonya yecandelo lezokhenketho zibandakanya: i-Emancipation Park, eKingston; IHarmony Beach Park, eMontego Bay; Indawo yokuhamba ngenqanawa eFalmouth; I-Treasure Beach, eSt. Elizabeth; kunye nePort Antonio Cruise Ship Pier.
Phakathi kwabantu ekujoliswe kubo ngabasebenzi abakwiihotele, izindlu zezindlu nakumakhaya eendwendwe, iindawo ezinomtsalane, izikhululo zeenqwelo moya, amazibuko okuhamba ngenqanawa, iimarike zobugcisa kunye nabasebenza kwezothutho emhlabeni.
Eli qela labizwa ngu-Mphathiswa u-Bartlett ekuqaleni kwale nyanga, libambisene no-Nobhala osisigxina weSebe lezoKhenketho, u-Jennifer Griffith, kunye noMongameli we-Jamaica Hotel kunye noMbutho wabakhenkethi (i-JHTA), u-Clifton Reader.
Amanye amalungu abandakanya uSihlalo weNkampani yoPhuhliso lweMveliso yoKhenketho (i-TPDCo), uIan Dear; Usihlalo weNgxowa-mali yokuPhucula uKhenketho, u-Godrey Dyer; Usihlalo weBhodi yezokhenketho yaseJamaica, uJohn Lynch; UMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; UMongameli kunye ne-CEO, iPort Authority yaseJamaica (PAJ), uNjingalwazi Gordon Shirley; UMlawuli oLawulayo weJamaica Vacations Limited (JAMVAC), uJoy Roberts; UMlawuli weSigqeba oBambeleyo, TPDCo, Stephen Edwards; UMlawuli oLawulayo weChukka Caribbean Adventures kunye noSihlalo weqela le-COVID-19 iqela lolawulo lweendlela, uJohn Byles; Usihlalo oLawulayo, iiSandals Resorts zamanye amazwe, uAdam Stewart; Usekela Mongameli wokuqala weCaribbean Hotel kunye noMbutho wezoKhenketho (i-CHTA) kunye nowayesakuba nguMongameli we-JHTA, uNicola Madden-Greig; UMcebisi oMkhulu kunye neQhinga kwiCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uDelano Seiveright; kunye noMphathi Jikelele weeReja Resorts, uRobin Russell.
Eli qela liya kwandiswa libandakanye nabameli beSebe lezeMpilo nokuPhila, iSebe loRhulumente woMmandla noPhuhliso lwamaPhandle, kunye noMkhosi woKhuselo waseJamaica. Amalungu eqela elisebenzayo, ahlangane namhlanje, kulindeleke ukuba adibane kwakhona kule veki, ukwenza amalungiselelo aqinisekileyo okuqinisekisa ukuba ithagethi yabasebenzi bezokhenketho abagonyiweyo iyazalisekiswa.